Eskil Erlandsson oo soo jeediyey in cunnada la sumadeeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Eskil Erlandsson oo soo jeediyey in cunnada la sumadeeyo
Publicerat måndag 18 mars 2013 kl 11.01
Wasiirka Beeraha iyo Horumarinta Miyiga Eskil Erlandsson (C) ayaa sabtidii isbeddelay oo sheegay in uu taageersan yahay ra’yiga Midowga Yurub uu doonayo in waajib laga dhigo calaamadaynta hilbaha baakadeeysan. Ra’yigaasina wuxuu hadda cambaarayn kala kulmay laamaha sameeya raashinka iyo qaar ka mid ah xisbiyada isku-tagga ee xukunka haya.
Bengt-Anders Johansson oo oo ka mid ah xubnaha xisbiga muderaatka ugu jira guddi-hoosaadka baarlamaanka ee arrimmaha beeraha iyo deegaanka ayaa sheegay in calaamadaynta raashinku ay kordhineyso kharashka ku baxa ganacsatada yaryar oo iyagu doonaya in ciddii dooneysa ay kala doorato raashin calaamadeeysan ay kala doorato.
Agaasimaha guud ee Shirkadaha cuntooyinku, Marie Söderqvist, waxay ka jeclaan lahayd in arrinta aad looga baaraandego inta aan go’aan laga gaarin.
- Fadeexadii hilibka farduhu waxay macaamiisha ku dhalisay in ay aad u daneeyaan in ay ogaadaan meesha cuntada laga keenay iyo in shirkadaha raashinka ka baayacmushtaraa ay tixgeliyaan rabitaanka dadka. Waxay kaloo sheegtay in shirkadaha ka ganacsiada raashinku ay wax ka beddeli doonaan calaamadaynta inta aan siyaasiyiintu gaarin go’aan siyaasadeed.